Xoogaga Tigreyga oo caawa gantaalo ku weeraray Magaalada Asmara – AfmoNews
Xoogaga Tigreyga oo caawa gantaalo ku weeraray Magaalada Asmara
Xoogaga Tigreyga Itoobiya ayaa caweyskii caawa gantaalo ku garaacay Magaalada Asmara ee Xarunta Wadanka Eritrea.
Illaa afar jug oo waaweyn ayaa laga maqlay Magaalada Asmara iyo daafaheedaba, sida ay Warbaahinta u sheegeen dadka halkaasi ku nool.
Weerarkan ayaa dadka deegaanka ku khasbay in uu yaraado dhaqdhaqaaqii magaalada, kuna xaroodaan guryahooda. Reer Asmara ayaa barraha bulshada saaxiibadood kula wadaagaya qoraalo ay markaasi ku sheegayan in caawa aanay xaaladdu wanaagsanayn.
Gantaalaha ayaa intooda badan waxay ku kala dhaceen xaafadaha Massawa iyo Mendefera, mana jirto khasaaro la’ogyahay, oo illaa iyo hadda la soo wariyay inay gantaalahaasi gaysteen.
14-kii bishan ayay ahayd markii Xoogaga TPLF ay sidaan oo kale u garaaceen Magaalada Asmara, iyagoona si gaar ahi u bartilmaameedsaday Garoonka Diyaaradaha.
Tigreyga ayaa sidoo kale Jimcihii garaacay deegaano hoos-tagga Magaalada Asmara, sida deegaanada Dekemehari, Gemehalo iyo Nefasit
Weerarka gantaalaha loo adeegsaday ee caawa lagu ekeeyay Magaalada Asmara ayaa ku soo aadaya saacado yar uun ka dib, markii uu Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed sheegay in Ciidamada Federaalka ay la wareegeen gacan ku haynta Xarunta Xisbiga TPLF ee Mekelle.